Diblomaasi Oo U Doodda Qadiyadda Somaliland Oo Booqday Sool | Gabiley News Online
Laascaanood (Hargeisa Press): Waxaa gobolka Sool ee Somaliland booqasho ku tegay diblomaasi sare iyo cilmi baadhe u dhashay dalka Maraykanka kana mid ah aqoonyahamiinta u doodad qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland.
Booqashadda uu gobolka Sool ku tegay Mr. Michael Rubin, ayaa ku soo beegmaysa xili ay goboladda Sool iyo Sanaag ka socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee Somaliland.
Waxaana booqashadda Michael Rubin, ee Sool ku wehelinayay diblomaasiyiin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, iyadoo halkaas uu hore u sii joogay wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Maxamuud Faratoon.
Isagoona wasiirku ka mid ah masuuliyiin xukuumadda ka tirsan oo Sool u jooga hawlaha wacyigelinta bulshadda iyo la socodka hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Aqoon yahankan u dooda qadiyadda Somaliland ee Maraykanka u dhashay waxaa magaaladda Laascaanood ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda, badhasaabka gobolka Sool iyo masuuliyiin kale.
Badhasaabka gobolka Sool C/qani Maxamuud Jiidhe, oo ka hadlay booqashadda diblomaasigaasi uu ku yimid Laascaanood.
Waxaanu yidhi, “Waxaa maanta xarunta gobolka Sool ee Laascaanood nagu soo booqday wefti heer sare ah oo ka kooban masuuliyiinta wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland iyo diblomaasi, aqoon yahan sare oo ka tirsan Aqoonyahamiinta beesha caalamka ee taageerta qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland.